«KANA BEEKTUU LAATA? – Kichuu
HomeAfaan OromooNews«KANA BEEKTUU LAATA?
Bara maaster plaanii jechuun qabsoon oromoo bahaa hanga dhihaatti ,kibbaa hanga kibbaatti ,alaa fi keessan finiinaa ture sana Taayyeen Har’a akkas bookkisu kun ijoollee hidhamtoota siyaasaa hanga tokko gurmeessuunii fi ilmaan oromoo yakka biran galan walitti qabuun akkas jedhe mana hidhaa Baatii(zuway )keessatti mootummaa cinaa dhaabbamnee wanta amma oromiyaa keessatti tahaa jiru balaaleffanna yeroon dhiifamni nuuf godhama jechuun ijoollee erga gorsee booda maqaa hidhamtoota 38 galmeessuun ibsa ejjennoo waliin wanta amma oromiyaa keessatti tahaa jiru ni balaaleffanna mootummaa cinaa dhaabbannee jedhee iyyata galchee ture.
Yeroo sanatti ijoollee 38 inni barreessee galche bulchinsa mana hidhaa baatuutti itti gaafatamaa kan ture Asaffaa Kidaaneetti akka kennamu kan godheef jaarsa Tigiree mooraa sana keessatti ilmaan oromoo basaasaa ooltu Abbaa kiyya (G/sillaasee ) nama jedhamu waliin deemee itti kennani sadii tahanii.
Nuyis hidhamtoonni yeroo sana achi turre maaliif akkas gootu jennee ijoollee inni galmeessee galche yeroo gaafannu ni baatu nun jedhe Taayyeen kanaaf bahuuf jenneet malee fedhii keenya irraa miti jedhan.
Itti Fufa …….icciitiin Taayyee Dandahaa mana hidhaa keessatti hojjechaa ture.
Nan sobee ijoollee mana hidhaa yeroo sana turtanii??»